Maitiro ekutarisa kuti inguva yenguva yekugadzirisa pane yako Mac | Ndinobva mac
Iwe ungangodaro usingade kutarisa yenguva nguva yekuvandudza pane yako Mac nguva dzose, asi vamwe vashandisi vanowana ichi chiziviso kana vachichinja nyika pavanotakura Mac yavo pavari saka zvakanaka kuti uongorore ruzivo urwu mune idzi kesi uye kudzivirira matambudziko. Shanduko iyi inogona kuitwa otomatiki asi zvinogona zvakare kuti iwe unogashira ziviso pakombuta yako kana iwe ukaivhura ichikukumbira kuti utarise idzi nguva dzenharaunda, nhasi tichaona maitiro ekuzviita nemaoko.
Tinogona kutaura kuti ari matanho akareruka uye kuti iwo haadi matanho mazhinji ekugadzirisa, mune iyi nyaya chinhu chega chinodiwa kuti uite izvi kugadzirisa ndeyekuve paMacOS High Sierra kana gare gare. Kana iwe uri mune yapfuura vhezheni yesystem, isu tinokusiya iwe pazasi penzira yekumisikidza iyo yenguva yenguva nemaoko. Asi ngatiendei nenzira yakapusa kutanga:
Kuvhura iyo michina uye kutarisa kuti isu tine network yekubatanidza ndiko kwakakosha, tobva tasarudza iyo Apple menyu> Sarudzo dzeSystem uye tinya paZuva nenguva. Iye zvino tava kuona chiziviso chinoratidza kuti pane yakagadziridzwa nguva yenguva ruzivo, isu tinotangazve uye ndizvozvo. Kana tikasaona chenjedzo, isu tinobuda muSystem Preferences uye tinomirira vaviri kana maminetsi matatu kuti vadzokorore maitiro.
Kana isu tichida kuita izvi mushanduro dzekare dzeMacOS kana zvakananga pamurume, tinogona kuvhura Sarudzo dzeSystem, tinya paZuva nenguva uye mupaneru tinoongorora kuti sarudzo haisi kushanda "Gadzirisa otomatiki nguva yenguva zvichibva nenzvimbo iripo" tobva tasarudza nguva yenguva uye ndizvozvo. Ungangoda kuvhura iyo yepasi kukiya kuti uite iyi nhanho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekutarisa kuti inguva yenguva yekugadzirisa pane yako Mac